Gudaha:-Ganacsade dhiirigeli dhalinyardaa Gobolkiisa.
Gudaha:-Ganacsade dhiirigeli dhalinyardaa Gobolkiisa.
Sunday January 13, 2019 - 18:19:12 in by Samiir Cabdi
Gudaha:-Ganacsade dhiirigeli dhalinyardaa Gobolkiisa. waxa soo dhamaaday wareegee luugu magac daray "GANACSADE DHIIRI GELI DHALINYARADAA" wareegsoo ay ku tartamayeen 13 naadi,wareeg soo bilaabmay21122018,wareegsoo dhamadayna 11/01/2019,wareegsoo hore aanan u arag sida luu soo agaasimay ama sida luu soo maamulay iyo loo xiisiinayay daawashadiisa,waxa aan uhambalyaynayaa13 ganacsade ee dhiirigalinaayay naadiyadii ka qayb galay tartanka haday tahay dresska iyo kharshkii garoonka ragasoo qaabilay wixii kharash ku baxaayay tartankaa,wareegsoo ay isku soo baxeen laba kooxood oo leeyahay mulkiilaha carwada (madani) iyo channelka (dsat) waxa aan si gaar usii hambalayaynayaa jamaal caabi axmed
mulkiilahaasoo ah mid ka qayb qaata hormarka gobolka togdheer gaar ahaan dhiirigalinta sport'ska iyo dhalinyarada tartankasoo ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u waanagsan,labadaa kooxood ku kala badiyay rikoodhyaal ay guuushu ku raacday kooxda (madani) in kaastoo ay ciyaar wanaagsanayd kooxda (DSAT) oo aan anigu taageersanaa kooxdan oo ah kooxdii aan asaasay ee ku ciyaarta magaca (dsat) ee garoomada ruuga cagaaran kooxdaasoo uu naga caawinaayay mulkiilaha dsat tartankaaso lagu qabanaayay garoonka burco sports center ama garoonka macadka,
waxa aan mar 3aad u hambalyaaynayaa ibraahim saleebaan naxar oo ah abaabulaha isku dabaridaha tartanka iyo qaar horoo badan ibraahim oo ah nin dhalinyaro ah oo sports man ah una soo baxay dhiirigalinta dhalinyarada sportska ee degmada burco. halkaas ka sii wad dadalkaad wado ee ah dhiirigeliinta dhalinyarada ilahayna ha kula garab gal